Zucchini nofenoina ratatouille sy akoho | Bezzia
Maria vazquez | 20/07/2021 10:00 | Salady sy legioma
Tamin'ny Alahady dia nozarainay taminay ny fomba fahandro Akoho misy amandyTadidinao ve izy? Androany, manolotra fomba hafa izahay, toy izany, ny fampidirana akoho ao anaty menioo amin'ny fomba voalohany. Ary ireo ve ireo zucchini tototry ratatouille sy akoho tsara amin'ny latabatra rehetra izy ireo.
Ity dia iray amin'ireo resipeo izay miditra amin'ny masonao noho ny fampisehoana azy. Resipeo azonao atao ovay amin'ny fomba fahandro vegan soloina proteinina niavian'ny zavamaniry fotsiny ilay akoho toy ny tofu, tempeh, heura ... safidio ilay tianao indrindra!
Ny fanomanana azy na dia mety ho sarotra aza, dia tena tsotra. Ary raha misy zavatra tiantsika momba azy dia izay eto no hanina daholo, aza mieritreritra fa ny zucchini dia fitoeran-javatra fotsiny ahitana famenoana. Natsatsika ny hazo mba ho malemy ary azo hanina.
Zucchini lehibe 1
Voasary lakolosy maitso 1, notetehina
Fonono tratra akoho 2 matevina, notetehina
Hetezo ny zucchini ho varingarina ary esory izy ireo, mitahiry ny pulp. Apetraho ao anaty lovia azo antoka amin'ny lafaoro ny varingarina, apetraho amin'ny menaka oliva ary endasina mandra-pahalemy nefa mbola milamina ihany. Raha ho ahy dia 20 minitra tamin'ny 180ºC
Mandritra izany fotoana izany, amin'ny lapoaly misy menaka roa tablespoons sosy ny tongolo sy sakay mandritra ny 10 minitra.
Nandeha ny fotoana, ampidiro ny hena zucchini dice ary mahandro 5 minitra hafa.
Avy eo, ampio ny voatabia voatetika ary mahandro amin'ny hafanana somary ambany mandritra ny 15 minitra.
Araraoty ireo 15 minitra ireo hikapohana ny akoho, raha mbola tsy nanao izany ianao dia arotsaho ary arotsaho anaty lapoaly izany amin'ny hafanana avo lenta.
Afangaro amin'ny ambiny ny akoho ny akora famenoana sy famandrihana.
Rehefa malemy ny varingarina zucchini, fenoy izy ireo ary asio fromazy grated kely eo amboniny.
Avereno amin'ny lafaoro izy ireo mandra-piempo ny fromazy.
Aroso ny zucchini feno ratatouille sy akoho mafana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » fomba fanamboarana » Salady sy legioma » Zucchini nofenoina ratatouille sy akoho